ajụjụ Hi ....
1 afọ 9 ọnwa gara aga #697 by PAYSON
Ọ na-a kwa ogologo ebe m gara forum. Hi niile ọhụrụ so. Ị dị nnọọ hụrụ na ghọrọ ndị òtù nke kasị mma na saịtị nke na ọ bụ ụdị. Ị ọ bụla ndudue na-eme otú ahụ, m nwetara mma na banyere 50 ugbo elu, niile kpamkpam mma. M mara mgbe ị na-a saịtị a n'obi na-efe, unu adịghị ịtụkwasị obi. Ị mara .... (ma ọ bụrụ na o yiri ka ọ dị mma, ọ eleghị anya bụ). Ọ bụghị ebe a .... na ha dị ka 12 ma ọ bụ 13 afọ na Biz na 0 nsogbu. Geeeez ... I-ada ka a frickin ere. M ekwe nkwa na ị, na na na. Ma na agbanyeghị, welcome ị ọhụrụ so.
Ndị na-esonụ ọrụ (s) kwuru Ekele dịrị Gị: Yustinzz
1 afọ 9 ọnwa gara aga #701 by Derrick1224
M nnọọ ẹmende P3D V4 na saịtị a bụ a ndụ nchekwa. Ihe m chọrọ ofufe ruo mgbe i nwere ike imeli a elu nruwe payware tinye on.